Wednesday, 11 January 2017 06:52
ထိုစီမံကိန်းကို နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ-ဂျပန်ပူးပေါင်းမှုဖြင့် MAPCO၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော စပါးခွံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရေးစက်ရုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မေလအပြီး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Friday, 23 December 2016 21:41
ရှမ်းကလေးကျွန်းကျေးရွာအနီးရှိ မြေနုကျွန်းနှင့် ကိုင်းကျွန်းမြေများအပါအ၀င် မန္တလေးမြို့အနီး ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ မြေဧက ၂,၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် မြို့ပြစီမံကိန်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဆောက်လုပ်မည့် သတ္တုပုံဖော်စက်ရုံ
သတ္တုပုံဖော်စက်ရုံ စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင် သီလ၀ါအထူးစက်မှုဇုန်တွင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Wednesday, 23 November 2016 17:06
ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ(မိလ္လာ) စက်ရုံသစ်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်
ရန်ကုန်မြို့၏ ရေဆိုးသန့်စင်စက်(မိလ္လာ) အတွက် စက်ရုံသစ်နှစ်ရုံ ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှစ်ဆန်ုးပိုင်းတွင် တင်ဒါခေါ်ယူမည်ဟုသိရသည်။
First Myanmar waste-to-energy plant
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အမှိုက်မှစွမ်းအင် (waste-to-energy) ထုတ်နိုင်မည့် စက်ရုံကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်တွင် တည်ဆောက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Friday, 08 July 2016 14:43
No.(33) Heavy Industry Cement Plant (Alpha Cement)
အမှတ်(၃၃) အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်) သည် ဘိလပ်မြေ တစ်နေ့တန် ၅၀၀၀ ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပါသည်။
Wednesday, 06 July 2016 13:24
No.(2) Steel Mill (Pang Pet)
ပင်းပက်သံမဏိစက်ရုံသည် ပန်ငိုကျေးရွာအနီး၊ ပင်းပက်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြေဧက ၅၁၆၀.၅၀ ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။
Tuesday, 05 July 2016 16:33
No.(1) Steel Mill (Myingyan)
မြင်းခြံသံမဏိစက်ရုံစီမံကိန်းကိုတပ်မတော်အစိုးရလက်ထပ်တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC မှ စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။နောင်အစိုးရအသစ်လက်ထက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအမှတ် ၁ သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ) ဟုပြောင်းခေါ်ခဲ့ပါသည်။
Thursday, 30 June 2016 16:53
Than Taw Myat cement factory
Than Taw Myat ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ခရိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။